Wondershare MobileTrans User Guide - Back Up iOS ka PC
MobileTrans Guide: Ndabere iOS ka PC
PS: Ọ bụrụ na ị chọrọ iji hazie ọnọdụ nke gị ndabere nchekwa. Nanị pịa menu na nri n'elu nke mpio na mgbe ahụ họrọ "Mwube" ime nke a. Ozugbo ị bụ obi ụtọ na ọnọdụ nchekwa, pịa "Ok".
Nzọụkwụ 3. Jikọọ gị iOS ngwaọrụ na kọmputa na iji eriri cables. Jide n'aka na Wondershare MobileTrans ghotara ngwaọrụ gị.
Nzọụkwụ 4. Tulee faịlụ ị ga-achọ ndabere.
Nzọụkwụ 5. Pịa na "Malite Nyefee" iji malite usoro. Na-igwe ejikọrọ site dum usoro.
Ọzọ: Back Up Android ka PC